Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ၏ အထူးသံတမန်က အာဖရိကတွင် အခက်အခဲများကျော်လွှားနိုင်ရေး ကူညီရန် အချက်လေးချက် အဆိုပြု
တရုတ်	ဝမ်ရိ	ကုလသမဂ္ဂ	COVID-19	အာဖရိကသမဂ္ဂ
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ၏ အထူးသံတမန်၊ တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သော ကုလသမဂ္ဂ (UN) နှင့် အာဖရိကသမဂ္ဂ (AU) အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးအား ပေကျင်းမြို့မှ တက်ရောက်နေစဉ် (ဆင်ဟွာ)	Politics, Law & Military
ဒီဇင်ဘာလ၌ ကုလသမဂ္ဂ (UN) လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော တောင်အာဖရိကနိုင်ငံက ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် ကုလသမဂ္ဂ (UN) နှင့် အာဖရိကသမဂ္ဂ (AU) အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွင် ဝမ်က မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းကို ပိုမိုဆိုးရွားစေလျက်ရှိကြောင်း၊ အာဖရိကရှိ နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ အာဖရိက၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးမှာလည်း စိန်ခေါ်မှုအသစ်များစွာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်သူ ဝမ်က ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေး၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် အာဖရိကကို အခက်အခဲများကျော်လွှားရန် ကူညီရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ တက်ကြွစွာပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။
အဆိုပြုချက် လေးချက်တွင် ဝမ်က ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အလေးထားပြောကြားခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် ကာကွယ်ရေးမျဉ်း တည်ဆောက်ရန် ၊ ငြိမ်းချမ်း၍ တည်ငြိမ်သော နေရာတစ်ခု တည်ဆောက်ပေးခြင်းနှင့် ဘုံချမ်းသာကြွယ်ဝမှု မျှော်မှန်းချက် ဖွင့်လှစ်ခြင်း နှင့် ကမ္ဘာ့စီမံအုပ်ချုပ်မှု၏ အသီးအပွင့်များ မျှဝေ‌ရေးအတွက် အာဖရိကပြည်သူများကို ထောက်ပံ့ပေးရေးစသည်တို့ကို အလေးထားပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဖရိကပြည်သူများ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လက်ခံရရှိနိုင်ရန်၊ ခေတ်မီတိုးတက်မှုကို အမှီလိုက်နိုင်ရေးကူညီရန်နှင့် နိုင်ငံတကာစင်မြင့်တွင် အာဖရိကနိုင်ငံများအတွက် ဆက်လက်ပြောဆိုခွင့်ရရှိရန် အတွက် ခိုင်မာသောထောက်ပံ့မှုများ ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံက အာဖရိကနဲ့အတူ လက်ချင်းတွဲလျက် ပိုမိုနီးကပ်သော တရုတ်-အာဖရိက အေးအတူ၊ ပူအမျှ အသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရေးလုပ်ဆောင်သွားဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်” ဟု ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
#China, #Africa, #WangYi, #UN, #COVID_19, #AU #Xinhua, #တရုတ်, #အာဖရိကသမဂ္ဂ , #ကုလသမဂ္ဂ, #ဝမ်ရိ, #ဆင်ဟွာ
BEIJING, Dec.5(Xinhua) -- Wang Yi,aspecial envoy of Chinese President Xi Jinping, Friday put forward four-point proposals to help Africa pull through difficulties as COVID-19 pandemic deeply affects the politics and economic and social development of African countries.
Wang made the remarks atahigh-level meeting on cooperation between the United Nations (UN) and the African Union (AU), which was initiated by South Africa, the rotating presidency of the UN Security Council in December.
The COVID-19 pandemic has exacerbated global crisis, profoundly affected the politics and economic and social development of African countries, and Africa's peace and security faceaseries of new challenges, said Wang, Chinese state councilor and foreign minister, at the meeting held via video link.
The UN should actively take measures to help Africa tide over difficulties, Wang said.
In the four-point proposals, Wang stressed solidarity in fighting the pandemic, and support for the African people to buildaline of defense for health and safety, buildapeaceful and stable homeland, and open upavision of common prosperity and share the fruits of global governance.
He said China will continue to provide strong support for the African people to embrace peace, help African countries catch the train of modernization, and continue to speak up for African countries on the international stage.
"China is willing to work hand in hand with Africa to buildacloser China-Africa community withashared future," Wang said. Enditem
Chinese President Xi Jinping's special envoy Wang Yi, also Chinese state councilor and foreign minister, attendsahigh-level meeting on cooperation between the United Nations (UN) and the African Union (AU) via video link in Beijing, capital of China, Dec. 4, 2020. The meeting was hosted by the UN Security Council via video link on Friday. (Xinhua/Li Xiang)
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်နှင့် နီပေါနိုင်ငံသမ္မတ ဘီဒီယာ ဒေဗီ ဘန်ဒါရီ တို့ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာအပြန်အလှန်ပေးပို့ပြီး ဧဝရတ်တောင်ထိပ်အမြင့်ကို အတူတကွ ထုတ်ဖော် ကြေညာ
Next Article သမ္မတရှီ၏ ၁၂ ကြိမ်မြောက် BRICS ထိပ်သီးအစီးအဝေး မိန့်ခွန်း ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ